कोभिड- १९ : ४२ दशमलव सात प्रतिशत सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्किए -
कोभिड- १९ : ४२ दशमलव सात प्रतिशत सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्किए
२२ असार २०७७, सोमबार १९:१० । काठमाडौं
नेपालमा कोभिड–१९ का जम्मा सङ्क्रमितमध्ये ४२ दशमलव सात प्रतिशत सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या छ हजार ८११ पुगेको बताए । कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत २४ घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या २६४ रहेको छ । आजसम्म कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या १५ हजार ९६४ जना पुगेको छ ।
त्यसैगरी ५७ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात नौ हजार ११८ आइसोलेशनमा रहेका उहाँको भनाइ छ । गत २४ घण्टामा १८० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । विगत २४ घण्टामा २३ प्रयोगशालामा चार हजार ७२१ जनाको आरटी पीसीआर विधिबाट नमूना परीक्षण भएको जानकारी दिए । क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिको सङ्ख्या २९ हजार २१५ रहेको छ ।
मन्त्रालयको दुई कल सेन्टरबाट ७४१ फोन प्राप्त भएको छ । हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेशन डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या एक लाख ५६ हजार ३०० छ । जम्मा इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या ६८ हजार २९ छ । आज मात्रै २९ जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ । त्यसमध्ये रेड जोनमा पर्नेको जम्मा सङ्ख्या ५१९ छ । त्यसमध्ये आज एकजना ललितपुरका छन् ।
१. निजगढमा कोरोना संक्रमितको संख्या शुन्य
२. बद्री पंगेनीको ‘बाटो हेरी नरोउ आमा’ सार्वजनिक
३. ‘हिड्दा हिड्दै’ मा आकाश र रेखा
४. साउदीमा कोरोना निको हुने बढ्दै, सोमबार नयाँ संक्रमित ४९२ जना
५. भेनस नेशनल कलेज : कक्षा ११ को कोर्षबारे घरमै जानकारी
६. यतीको सस्तो मूल्यमा आकर्षक प्याकेज सार्वजनिक